Kismaayo News » Raadadkii Al-Shabaab oo la masaxayo
Raadadkii Al-Shabaab oo la masaxayo
Kn: Sawirka muuqda waa magaalada Wanlaweyn ee Shabeelada Hoose, nin ayaa saaran aargo ku taala magaaladaasi, waxa uu rinji cad ku masaxayaa qoraalo ay Alshabaab halkaasi ku qortey kuwaasoo ah magacyo rag carbeed oo ay ugu magac dareen dariiqa.
Waxaa hoosta taagan koox askarta ciidamada ah, si ay u xaqiijiyaan amaanka ninka rinjiilaha ah.
Muddo ka hor ma jirin cid ku dhici karta in ay xitaa ka hadasho waxa ay xarakada samayso, magaca meesha lagu qoreyna ma ahan qof ay dadka garanayaan amaba arkeen.
Meelo kale oo dalka ka tirsan sida magaalada Kismaayo oo kale waxaa la masaxay qoraalo badan oo ay Alshabaab ka tageen, waxayna ka mid tahay talaabooyin dadka xusuustooda looga meeyrayo jiritaanka Alshabaab.
Laakiin Shabaabku ma ahan kuwa ku tagay qoraaladooda oo la tirtiro, shalay oo ugu dambeeysey weerar fajiciso ah oo ay ku qaadeen magaalada xuduuda ku taala ee Balad Xaawo ayay ku qabsadeen magaaladaasi, kuna dileen tiro dad ah, waxana ay tani dad badan soo xusuusisey in Shabaabka aysan meel dheer jirin, markastana soo laaban karaan, gaar ahaan xili la hadal hayay in ciidamada Uganda ay baxayaan.
Waxaa jira meelo badan oo ay wali ku harsanyihiin qoraalada Alshabaab, gaar ahaan meelaha ay ugu magacdareen ajaaniibta, waxaana ka mid ah suuq ku yaala magaalada Baraawe oo loogu magacdaray Saalah Nabxaan oo ahaa nin iyaga majaraha u hayay oo ajnabi ah oo duqeyn xagga cirka ah lagu diley.